စီးပွားဖြစ် ဂြိုဟ်တု ကုမ္ပဏီ Space Trek သည် ငွေကြေးထောက်ပံ့ မှုကို အာမခံ သည် - Pandaily
Jan 26, 2022, 16:31ညနေ 2022/01/26 23:36:45 Pandaily
အင်္ဂါ နေ့တွင် Beijing Space Trek Technology Co., Ltd. မှ၎င်းသည် မကြာသေးမီက ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာ တန် သော ရန်ပုံငွေ အသစ် ကိုရရှိ ခဲ့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများတွင် Weifang Aerospace Investment Partnership နှင့် Zibo Zhongshu Yunzhi Investment တို့ပါဝင်သည်။
Space Trek သည် 10Fund ၊ Qixi Entrepreneurship Management Partnership, Emerging Capital, Guoxin H & S နှင့် Tongfang Investment စသည့် လူသိများသော တရုတ် အကျိုးတူ အရင်းအနှီး နှင့် မဟာဗျူဟာ မိတ်ဖက် များထံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရန်ပုံ ငွေများကို စက်မှုလုပ်ငန်း ကွင်းဆက် များ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ ၏နည်းပညာ အဖွဲ့ တိုးချဲ့ ခြင်းအပါအ ၀ င် အရည် လွှတ်တင် နိုင်သော ဒုံးပျံ စနစ် များနှင့် တာဝေး ပစ် ပစ်မှတ် ဒုံးကျည် များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက်အသုံးပြုသည်။
စတင်တည်ထောင် ချိန် မှစ၍ Aerospace Trek သည် “အာကာသ ၀ င်ရောက်မှု စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက် စေရန်နှင့် အာကာသ စွမ်းအင် ကို အထောက်အကူပြု ရန်” ၏တာ ၀ န် နှင့်အတူ ဆန်းသစ် ။ ထိရောက်သော အာကာသ လွှတ်တင် ရေး ယာဉ် များ၊ ပစ်မှတ် ဒုံးကျည် အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လေယာဉ် ဒီဇိုင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကို ကတိပြု ခဲ့သည်။
၎င်း၏အဓိက အဖွဲ့ ၀ င်များသည် စစ်တပ် ၊ China Aerospace Technology Group Co., Ltd., China Aerospace Science and Industry Group Co., Ltd. နှင့်အခြား အဖွဲ့အစည်း များတွင် အလုပ်လုပ်သော & nbsp ဖြစ်သည်။ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူ ။ Space Trek တွင် ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းကိရိယာ များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရန်လိုအပ်သည့် အရေးကြီးသော အဓိက စွမ်းရည် များနှင့် nbsp များရှိသည်။ .
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ် စီးပွားဖြစ် ဒုံးပျံ ကုမ္ပဏီ Galaxy Energy သည်ယွမ် ၁. ၂၇ ဘီလီယံ ရန်ပုံငွေ ရရှိ ခဲ့သည်
ကုမ္ပဏီသည် Discovery One suborbital လွှတ်တင် ရေး ယာဉ် နှင့် D140 supersonic cruise target target ဒုံးကျည် ၏ပထမဆုံး ပျံသန်း မှုကို ပြီးစီးခဲ့သည်။ D140 Y2 ၏စမ်းသပ် ပျံသန်း မှုကို ပြင်းထန်စွာ နှင့် စနစ်တကျ ဖြန့်ကျက် လျက် ရှိသည် စမ်းသပ် ပျံသန်း မှု ကိုမ ဝေး တော့ သော အနာဂတ်တွင် ပြီးစီး လိမ့်မည်။
Zhihuiya မှ ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ Space Trek တွင် မူပိုင်ခွင့် လျှောက်လွှာ ၄၀ ကျော်ရှိပြီး ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် မှာ တီထွင် မှု မူပိုင်ခွင့် များဖြစ်သည်။ မူပိုင်ခွင့် အများစုသည် လေယာဉ်ပျံ များနှင့် payload fairing များ နှင့်သက်ဆိုင်သည်။